कोरोनासँगै थपिए ग्रामीण महिलाका दुःख ‘मुग्लानबाट श्रीमान् फर्किए, ऋण कसरी तिरौँ ?’ - Hamro Bulletin
मेनुका ढुंगाना बुधबार १७, भदौ २०७७ ०७:३२
कोरोना संकटका कारण लकडाउन भएको दोस्रो महिना ढकारी गाउँपालिका जाने मौका मिल्यो । कोरोनाको सन्त्रासमा गाउँ पुग्नु त्यति सजिलो थिएन । गाउँमा जाँदा त्यहाँका महिलाहरुसँग कुराकानी गर्न सुरु गरेँ । गाउँलेहरु सुरुमा खुलेर कुरा गर्न अप्ठ्यारो मान्छन् । म एकजनासँग कुरा गर्न अघि सरेँ । बाहिरबाट आएकासँग बोल्न अप्ठ्यारो लागेर होला? उनले मुख छोपिन् । जब मैले अछामी भाषा बोलेँ, ‘किन लाज मान्नी छओ । मेरो घर पन मंगलसैन हो ।’मैले यति भनिसकेपछि उनी मुसुक्क हाँसिन् । ‘तमी पन याँइ कै बोली बोल्नी रैछओ । काँ की पो हुन् सुचेर अप्ठ्यारो लाग्यो ।’ उनको हुलिया र चाउरी परेको अनुहारले उमेर झण्डै ५० को हाराहारीको अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो । मैले उनलाई सोधेँ, ‘नाउँ क्या हो तम्रो ? तमी कती वर्षकी भया ?’ उनको जवाफ आयो ‘नाउँ मेरो धौली बुढा । ३५ बस्सकी भैगया । ५ वटा छोराछोरी छन् । घरवाला बम्बै छिया । नौलो रोग आएर घर आइगया । अब यी केडाकेटी
(छोराछोरी) लाई कसरी पढाउन्या हो । बड्डा घर आएपछि राति निन् (निद्रा) छैन । दिन भोक छैन ।’ उनले एकोहोरो आफ्ना समस्या सुनाइरहिन् । श्रीमान् घर आएपछि उनलाई ठूलो पीडा परेको छ । कारण अरु केही होइन, अब घरबार कसरी धान्ने कुराले उनको मनमा चिन्ताको बादल छाएको छ ।
उनका यति कुरा सुनेर छेवैकी अर्की महिलासँग कुरा गर्न पुगेँ । धौलीसँगको सबै कुरा उनले सुनिसकेकीले मेरो परिचय दिइराख्नै परेन । उनी सहजै बोल्न तयार भइन् । मैले डायरीको पाना पल्टाउन नपाउँदै उनले आफ्नो बेदना सुनाउन थालिन् । ‘सबै ठाउँ रोग आयो भन्ने सुनेर बड्डा पन घर आया । घर आएको महिना दिनसम्म त शान्ति छियो (थियो) । बम्बैबाट ल्याएको नाप (थोरै) पैसा हुँदासम्म कलह पन केही भएन । जब पैसा सक्यो, त्यही दिनदेखि मेरा घरमा शान्त छैन’, उनले सुनाइरहिन्, ‘गाउँमा रक्सी भनेजति पाइन्छ । दाल, चामल उधारो नदिने साहुले रक्सी भने दिँदा रैछन् । दिनभरि बड्डा पसलमा हुन्छन् । बासा (साँझ) रक्सी खाएर घरमा आएपछि मलाई र छोराछोरीलाई कुट्न सुरु होइजान्छ (भइहाल्छ) ।’
यति कुरा सुनाएपछि मलाई उनको पारिवारिक अवस्था थप बुझ्न गाह्रो भएन । ४ जना छोराछोरी रहेछन् । उनी फेरि गर्भवती छिन् । उनीसँग कुरा गर्दै जाँदा थाहा भयो, आफूले चाहेर वा रहले उनी गर्भवती भएकी होइनन् । सन्तानको रहर पनि होइन । न त कुनै योजना । तर नचाहेरै पाँचौ सन्तानकी आमा बन्दैछिन् । सन्तान अब चाहिँदैन भन्ने कुरा उनले श्रीमानलाई नसुनाएकी होइनन् । बिहानैदेखि जाँड खाएर बस्ने श्रीमानसामु उनी सधैं हार्छिन् । ढकारीका यी महिला प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । उनले असह्य पीडा मलाई सुनाइन् । तर नाम नखुलाउने सर्तमा ।
उनीजस्ता थुप्रै महिला छन्, जसले परिवार र श्रीमानलाई आफ्ना कुरा राख्न सक्दैनन् । श्रीमान्को इच्छा नै उनीहरुको इच्छा हो । अझै भनौं, श्रीमान्ले श्रीमतीका कुरा सुन्न चासो नै देखाउँदैनन् । आफूले चाहेका बेला श्रीमतीको शरीरमा खेल्छन्, गर्भवती बनाउँछन् ।
ऋण तिर्नु कसरी?
त्यही दिन जिल्लाकै विकटमध्ये एक तुर्माखाँद गाउँपालिका जाने मौका मिल्यो । ढकारीका महिलासँग कुरा गरेपछि मनमा अनेक कुरा खेल्न थाले । र, छट्पटी हुन थाल्यो । कोरोना त लाग्ना, नलाग्ला तर यसले गर्दा गाउँमा अनेक समस्या देखिएका छन् । कतिपयले कोरोना जितेर निको पनि भएका छन् । तर कोरोनाको सन्त्रासले गर्दा अन्य समस्याहरु निम्तिएका छन् । कतिपय समस्या यसरी फैलिएका छन्, अब निको हुनै सक्दैन । तुर्माखाँदमा पनि महिलाहरुसँग भेटघाट भयो । मैले कुरा गर्न सुरु गरेँ ४५ वर्षीया पारु बयकसँग । उनले श्रीमान् रोगकै डरले घर आएको कुरा सुनाइन् ।
‘आफू बिरामी उपचार खर्च नहुँदा माइतीको लालपूर्जा बैंकमा राखेको छु । एक महिनामा १४ हजार बैंकमा किस्ता बुझाउनु पर्छ । महिनामा किस्ता बुझाउनलाई श्रीमान्ले हरेक महिनाको ५ गते पैसा पठाइसक्थे । तर अब श्रीमान्ले पैसा पठाउन सक्दैनन्,’ मैले उनका कुरा डायरीमा टिप्दै थिएँ, उनी भन्दै गइन्, ‘भारतमा कोरोना भाइरस फैलिन थालेपछि वैशाख १५ गते श्रीमान् घर आइसके । बिरामी हुँदा बैंकबाट कर्जा निकालेकी थिएँ । बम्बैबाट पैसा आउँथ्यो र किस्ता तिर्थेँ । पैसा कमाउने मान्छे नै घरमा छन् । अब त बम्बैको भरोसा पनि टुट्यो ।’
एकातिर भारतबाट रोजगारी गुमेर घर फर्किनुपर्दाको तनाव, अर्कातिर परिवार व्यवस्थापन गर्न नसक्दाको तनाव । यसले जतिबेला पनि मदिरा पिउनु, श्रीमती, छोराछोरीलाई कुटपिट गर्नु, तास खेल्नु नै अहिले अधिकांश पुरुषको दैनिकी बनेको छ । यति भन्दै गर्दा सबै दोष पुरुषलाई दिन खोजिएको होइन । आखिर पुरुषले नै कमाएको पैसाले त परिवार चलेको छ । भारतका गल्लीगल्लीमा डण्डा हानेर उनीहरुले परिवार पाल्न सकेका थिए । समस्या त बेरोजगारी र आर्थिक अभावले निम्त्याएको हो । जसले परिवारमा कलह भित्र्यायो भने समाजमा पनि अशान्ति बढेको छ । हुन त बाँझो जग्गा खनेर पनि जीविका चलाउने उपाय गर्न सकिन्थ्यो । तर भारत जाने परम्पराले गाउँलेका लागि खेतीपातीमा ध्यानै जान छाड्यो ।
निराश छ गाउँ
अरु बेला प्रदेश गएका श्रीमान् घर आउँदा खुसी हुने ग्रामिण महिला अहिले चिन्तित छन् । भारतबाट आउने, खेतिपाती लगाएर फेरि कमाउन फर्किने भएकाले उनीहरु खुसी हुन्थे । तर अहिले फर्किने टुंगो छैन । दशैं, तिहार आउँदा उल्लासमय हुने ग्रामीण भेगमा भारतबाट श्रीमान्, छोरा, भतिजा आउँदा दोब्बर खुसीयाली छाउँथ्यो ।
तर अहिले समय बदलिएको छ । गत मंसिरमा गहुँ छरेर मुग्लान पसेका अधिकांश पुरुष चैतमा गाउँ फर्किन सुरु गरे । त्यसपछि ग्रामीण परिवारमा तनाव, अभाव र भोकमरीले गाँजेको छ । मुग्लानबाट घर आएपछि फर्किने टुंगो छैन । नफर्किएपछि घरबार कसरी चल्छ ? हो, यही कारणले आफन्त भारतबाट फर्किँदा पनि गाउँमा खुसी छैन । परिवारको गुजारा चलाउने बाटो नै बन्द भएको छ ।
यसअघि बम्बैबाट श्रीमान्ले पैसा पठाउने बाटो कुर्थे । त्यही पैसाले परिवारको रोजीरोटी चलाउने महिला अहिले निराश छन् । अधिकांशको परिवारमा पैसा आउने स्रोत बन्द भएको छ । अब बम्बै जान नपाए अधिकांश छोराछोरीका रहर पूरा हुने छैनन् । विभिन्न कारणले लागेको ऋण तिर्न त कठिन भएकै छ । साहुलाई ब्याज तिर्न पनि नसकेर पनि धेरैको परिवारमा अशान्ति सुरु भएको छ । यसको मूल कारण हो, घरको कमाउने मान्छे नै बेरोजगार भएर गाउँमै थन्किनु ।
चलनचल्तीको ज्यालादरमा काम गर्न इच्छुक र सक्षम मानिसहरुले रोजगार पाउन नसक्दा विभिन्न खालका समस्या थपिँदैछन् । यसले समाजमा आर्थिक संकटसँगै अनेकन विकृति र समस्या पनि बढाएको छ । बेरोजगारीले गरिबी, असमानता, चोरी, डकैती, वेश्यावृत्ति, मानव बेचबिखन, हत्या जस्ता गम्भीर समस्या निम्त्याइरहेको छ ।
सरकारले चलाइरहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत गाउँ फर्किएकालाई फाइदा दिन उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु आवश्यक भएको छ । त्यो लगानीले माथि उल्लेखित जस्तै ग्रामीण परिवारलाई राहत मिलोस् । साविकको जिल्ला विकास समितिको कार्यालयको तथ्यांकमा अछामका ४० हजार भन्दा बढी भारतमा कामको सिलसिलामा गएको देखिन्छ ।
करिब ६ वर्ष अघि गरिएको सर्वेक्षेण भएकाले हालसम्म ५० हजार भन्दा अछामी भारत पुगेका छन् । कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमणले करिब २० हजार युवाहरु अछाम फर्केको अनुमान छ । स्वास्थ्य कार्यालय अछामका अनुसार चैत ११ गतेदेखि हालसम्म करिब १५ हजार व्यक्ति क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् । माघदेखि चैत १० गतेसम्म करिब ५ हजार व्यक्ति भारतबाट अछाम फर्केको अनुमान छ । यसरी हेर्दा अहिलेसम्म २० हजार फर्किए भने अझै ३० हजार भारतमै रहेका छन् ।
एकैपटक हजारौंको संख्यामा भारतबाट फर्किँदा पनि तीन तहकै सरकारले रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने कुरालाई प्रथामिकतामा राखेको देखिँदैन । तत्काल बेरोजगार अवसर दिन उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन सके धेरैजस्तो ग्रामीण परिवारको समस्या सामाधान हुन सक्ने देखिन्छ ।